Allgedo.com » News
Guddoomiye Ku Xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda oo xariga ka jaray xarumaha adeegga bulshada ee Deyniile iyo Dharkiinleey
Muqdisho, Somalia (AOL) – Guddoomiye Ku Xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Benaadir Mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa maanta xariga ka jaray xafiisyada Adeegga ee degmooyinka Deyniile iyo Dharkiinleey ee Gobolka Benaadir. Xafiisyada Adeegga heer degmo ee la hir geliyey ayaa bixin doona adeegyada shatiyada, dhalashada iyo sugnaanta, kaarka aqoonsiga ee dawladda hoose, Nootaayooyinka iyo adeegyada...
Aniga oo ah Aden Colujoog, waxaa farxad weyn ii ah arooska wiilkeyga curudka ah, Maxamed Aden Colujoog iyo marwadiisa Ikraan Carab Muuse oo ka dhacay magaala weynta Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka. Maxamed iyo Ikraan waxaan leeyahay guurkiina Rabbi haka dhigo kii bulaala oo aad ka heshaan awlaad baari ah oo wax tara naftooda, waalidkooda, diintooda, dadkooda iyo dalkooda. Hambalyo...
Labadan nin ee kore, mid waliba waa madax hadana isku qiimo maha, waayo? Midi waa Raysal wasaaraha dalka Ethiopia Hailemariam Desalegn oo dhabrkiisa danbe uu ka babanaayo cida uu matalo oo madaxda u yahay calankoodii. Tani waxay astaan u tahay in uu yahay nin leh dawlad. Dhanka kale, waxaa fadhiya oo kasoo horjeeda Madaxwaynaha Somaliland oo dhabarkiisa uu san ka babanayn calan muujiya cida uu...
Muqdisho, Somalia (AOL) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeeray xeryaha ciidanka xoogga dalka ee Bangala iyo xarunta tababarka ciidanka ee Jeneraal Dhagabadan oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo kormeerkiisa ka bilaabay xerada Bangala ayaa warbixinno ka dhageystay ciidamada iyo Saraakiisha Xoogga ee halkaas ku...
Muqdisho, Somalia (AOL) – Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo kulan la qaatay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho ayaa kala hadlay horumarka iyo amniga Caasimadda. Guddoomiyaha ayaa ku bogaadiyey odayaasha dhaqanka Gobolka sida ay ugu taaganyihiin horumarinta iyo dib u dhiska kaabeyaasha dhaqaalaha, isagoona...
Muqdisho, Somalia (AOL) – Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo shaqada ka joojiyey mid ka mid ah shaqaalaha Gobolka ayaa sheegay in sharciga la hor geyn doono qof kasta oo ku lug yeesha sameynta dukumiintiyada ganacsi ee been abuurka ah. Guddoomiyaha ayaa faray Ciidanka Ilaalada deegaanka Xamar iyo qeybta Maamulka iyo Maaliyadda...
INAA LILAAHI WA INAA ILAAHI RAAJICUUN. Rabbi ha u naxariistee waxaa dhawaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday marxuum Eng. Cabdirashiid Sheekh Maxamuud. In kasta oo ay geeridu tahay mid xaq ah oo uu qof waliba dhimaayo waqtigii uu Rabbi u qoray in uu dhinto, ayaan haddana maanta si weyn uga naxay geerida lama filaanka ah ee ku timid Allaha u naxariistee saaxiibkey Eng. Cabdirashiid Sheekh...
Inaa Lilaahi wa inaa Ilaahi Raajicuun. Rabbi ha u naxariistee waxaa dhawaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday marxuum Cabdirashiid Sheeikh Maxamuud. Marxuumka oo muddo dheer ku noolaa dalka Mareykanka ayaa asaga oo caafimaad qaba todobaadkii lasoo dhaafay u dhoofay dalka Kenya si uu usoo booqdo eheladiisa oo aanay muddo dheer is arag, hase yeeshee, si lama filaan ah ugu dhex dhintay...
Madaxweyne Farmaajo oo casho sharaf soodhaweyn ah u sameeyey Golaha Amniga Qaranka
Muqdisho, Somalia (AOL) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa casho sharaf soodhaweyn ah waxa uu Madaxtooyada ugu sameeyey Golaha Amniga Qaranka. Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada oo maanta iyo shalay soo gaaray Muqdisho, ayaa u yimid ka qeybgelitaanka Shirka Amniga Qaranka oo berri furmi doona. Casho sharafta waxaa kasoo qeyb...
Muqdisho, Somalia (AOL) -Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa kala hadlay Wakiilka gaarka ah ee Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya Michael Keating sidii xal waara loogu heli lahaa Barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha oo Xarunta Dawladda Hoose kula kulmay Wakiilka Qaramada Midoobey...